Nin kale oo diiday in uu salaamo haweeney ka dibna kamuunka dacweeyay | Somaliska
Nin ku nool magaalada Borlänge ayaa dacwad ka gudbiyay kamuunka ka dib markii uu sheegay in loogu hanjabay in uu ka shalaayi doono maadaama uu diiday in uu gacanta ku salaamo haweenay uu baraatiig u sameyn lahaa.
Isaga oo la hadlay wargeyska Dala Tidning ayuu sheegay in markii uu tagay goobka baraatiiga ay haweenay gacanta u soo taagtay isagana uu gacanta shafka saaray si uu u muujiyo in uusan salaami karin haweenka. Haweeneyda ayuu sheegay in ay fahantay sababta uusan u salaami karin.
Waxa uu sheegay ka dib in shaqaalaha Kamuunka ay hanjabaad u soo jeediyeen, iyagoo ugu hanjabay in uu ka shalaayi doono 2 isbuuc gudahood, taasoo macnaheeda yahay in uusan heli doon baraatiik, shaqo ama ceyr dambe.
Hada ayuu dacwo u gudbiyay Xafiiska ka hortaga cunsuriyada (Diskrimineringsombudsmannen, DO) oo baaritaan ku samayn doona kiiska ninkaan.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay dood ka dhalatay arinta salaanta, dhowr jeer ayay hore u dhacday in magdhow la siiyay dad Muslimiin ah oo lagu cunsuriyeeyay salaanta darteed.
Swedishka ayaa ku doodaya in maadaama qofku uu wadankaan ku noolyahay uu salaamo cidkasta, halka Muslimiintu ay cadeynayaan in ay diinta ka soo horjeedo salaanta dumarka iyo ragga. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid ah Muslimiinta ayaa salaama dumarka.
Oo ANAGII AYAA KALA SOCONEE SEE YEELNAA ,MARKII HORE IIMAAN MIYAAN LAHEYN SALAANTU WAXAY ILA AHEYD WAX AAD U XUN OO GACMAHAH NAAG AJNABI AH INAAD GALISO DHIMBIL NAAR AH AYAA KA FIICAN IN AAD QABSATO, LAAKIIN HADA WAXAAD MOODAA INAAN MARKII NALOO SOO TAAGABA DALAQ GACANTA KU SIINEYNO MINDHEE IIMAANKEENII AYAA DACIIFAY ALLE HA NAHANUUNIYO, Siyaasad,se diintu ma diidana. Waxaa jirey asxaab gaalo qabsatay, ninkii amiirka u ahaa ayaa waxaa la yiri hadaad madax iga dhunkato waan kuu sii daynayaa asxaabtaada dhan oo ah intii uu hogaaminayey, wana ka dhunkaday, Amiirkii muslimiinta ayaa loo sheegay hadaanan qaldaneyn amaba nebiga aheyn illaahbaa ku cilmi leh,e laakiin wey jirtaaa qisadu waana lagu amaanay caqiga uu sameeyey asxaabtiina uu soo badbaadiyey. Gaal dhunkashadiis ileyn jaceyl kama aheyne waxay ka aheyd inuu badbaadiyo muslimiinta. Gaalada adigoo caqligaaga isticmaalaya oo shaqo ka sasabanaya gacanta hadii loo galiyo niyadna aysan iga aheyntaas ha la weydiiyo culumada wixii ka jaban.
Dhammaan Culumada Ummada – kuwoodii hore ee salafka iyo kuwa hadda jooga. Fuqahada iyo Mufasiriinta iyo Ahlu Xadiiska iyo kuwa kale waxeey dhammaan isku waafaqeen Xaaraam ineey tahay in la salaamo Dumarka Ajnabiga kaa ah.
Nabigu صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri : Ma salaamo Dumarka Ajnabigaa.
Macqal Bin Yassar R.D wuxuu yiri : Nabigu صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri 🙁 Midkiin inuu Dhinbil daba qabtaa uga fiican inuu gacan dumar ajnabiya salaamo.
Almuhiim walaalayaal Arzaaqada wixii Allah idiin qoray wallahi cidina idinkama qaadaneyso lkn yaan danbi lagu raadshan . Walaalka F.M ee iga horeeyay wuxuu yiri Diintu siyaasad waa ogoshahay , oo ma Allaah ayaa u Siyaasadeynee ?
Danbi cad inta la dabaasho yaan Diinta lagu saan tiray. Adoo Danbiga gala qirtana ayaa kaaga wacan inaad Diinta Qiil ka raadsato. Waxaa tusaale usoo qaadatay , ninkii Madaxa gaalka shumiyay ,, Lkn Shuruudiisu aheyd inuu Boqolaal Maxaabiis Muslimiina kusoo daayo.
Taasi Naf Muslimiin ayuu ku badbaadinaayay , waana garan kartaa naftaada ayaa lagu idmay haddaa u baqdo inaad Gaalnimo Afka uga dhawaaqi karto haddaa ku badbaadsanee nafta laakiin aysan Qalbiga kaa jirin. Maxaad ka filee madax gaal oo la shumiyay oo maxaabiis Muslimiin lagu soo daayo. Wallaahi Buush kiisa waan shumin lahaa Muslimiinta Reer Falastiin haddii la deynaa.
Intaan salamaan waliba Kram siyaaaa